Friday May 29, 2015 - 16:37:18 in Wararka by Super Admin
Maanta waxaa barnaamijka looga hadlay HADALADA ISKA HOR IMANAYA ee wadaadaha shisheeyaha taageera kuwaasoo sannado ka hor oran jiray ciddii gaalo usoo hiilisaahi waa gaal haddana oranaya laguma gaaloobayo arrintaas. Wadaadahaas oo sidoo kale tageera dowladaha shisheeye ayaa waxaa baryihii u dambeeyay halku dhegyo bulshada kasoo burqaday sida:- HEBAL SHALAY IYO MAANTA.
Sheekh Maxamad Cabdi Umal oo ugu cad cad wadaadaha ay hadalladoodu is lagdayaan ayaa dhawaan Nayroobi ku qabtay muxaadaro uu cinwaan uga dhigay isbadalka fatwada caalimka.
Muxaadaradiisa ayaa waxa uu ku muujiyay inaaney hadaladiisu iska hor imaaneyn oo uu kalimad walbaahi ka yiri waaqiceeda wuxuuna arimahaasi tusaalooyin uga dhigay Axaadiith laga wariyay Nabigeena SCW.
Haddaba si aan wax badan uga ogaano arintan sax iyo khaladba iyo sdioo kale wax yaabaha ay jihaadka u cilleeyaan wadaadaha shisheeyaha taageera ayaanu barnaamijka Diiradda Jimcaha ku casuumnay qaar kamid ah culimada aqoonta durugsan u leh diinta islaamka inagoo sidoo kale kusoo qaadanay kalimaad mowduucan quseynaya oo uu horay u jeediyay Sh/Mukhtaar Abu Zubeyr Amiirkii Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Shahaadadiisa Allaah ka aqbalo’e.
Sh/Jaamac C/salaam Warsame
Sh/C/Qaadir Muumin Yuusuf
Sh/Cali Cabdullaahi (Cali Katiin)
Halkan ka dhageyso Diiradda Jumcaha MP3
Dhuusamareeb oo laciir ciiraysa ciidamo kala taabacsan Farmaajo iyo hoggaamiyaasha Maamul goboleedyada.